Useshonile umama wenzingane otakulwe ebhilidini elibhidlikile | News24
Useshonile umama wenzingane otakulwe ebhilidini elibhidlikile
Nairobi – Umama wezingane ezimbili otakulwe ebhilidini elinezitezi eziyisikhombisa eliwile eNairobi, eKenya, useshonile esibhedlela, iziphathimandla zisho kanjalo ngoLwesithathu, njengoba kunokwesaba ngokuthi kunabanye abantu abaningi abasavaleleke ngaphansi.
Indodakazi yalo mama kanye nendodana basesimweni esizinzile ngemuva kokudonswa ngaphansi kwezicucu zaleli bhilidi eliwile endaweni ehlala abantu abahlwempu ngasesikhumelweni sezindiza saseNairobi, eningizimu nempumalanga enhlokodolobha yaseKenya.
OLUNYE UDABA: BUKA: Ubumayemaye ibhilidi lisha ubuhanguhangu kunabantu phakathi
“Ngeshwa, owesifazane oyedwa okhulile, okukholakala ukuthi ungumama wezingane ezitakuliwe, ubulawe ukulimala ngesikhathi elashwa esibhedlela,” kusho okhulumela iNational Disaster Management Unit, uPius Masai, nokunguyena osingethe uhlelo lokusingatha kanye nokutakula ngemuva kwenhlekelele yangoMsombuluko ebusuku.
Lokhu kusho ukuthi isibalo sabashonile sesifinyelele kwababili ngemuva kokutholakala kwesidumbu somfana eseshonile ngaphansi kwemfucuza ngoLwesibili ebusuku.
Lesi sigameko sesenze kwaqala phansi ukugxekwa kokwakhiwa kwamabhilidi kuleli dolobha elihlala abantu abangaphezulu kwezigidi ezintathu.
Amaphoyisa kanye nezakhamizi zakule ndawo zithi iziphathimandla zibizwe ngoMsombuluko ngemuva kokuqhekeka kwaleli bhilidi, nokwenze kwakhishwa abantu ngokushesha ngaphambi kokuba liwe ngemuva kwamahora amabili.
Izikhulu zithi zitakule iningi labahlali, kodwa okungenani babili abantu okusatshelwa ukuthi bayashoda, ngokweRed Cross.